ANKATSO : Nijanona ny hetsiky ny mpianatra satria Nanomboka ny fizarana ny vatsim-pianarana
Nivaly avokoa ny fangatahana izay nataon’izy ireo afa-tsy ny fampiakarana hatrany amin’ny 40% n’ny vatsim-pianarana izay efa nambaran’ny fanjakana fa tsy mbola zakany aloha amin’izao fotoana izao. 7 mai 2010
Nanomboka hatramin’ny Talata teo ny fizarana ny vatsim-pianarana sy ny fanampiana ara-pitaovana hoan’ireo mpianatra eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Nivaly avokoa ny fangatahana izay nataon’izy ireo afa-tsy ny fampiakarana hatrany amin’ny 40% n’ny vatsim-pianarana izay efa nambaran’ny fanjakana fa tsy mbola zakany aloha amin’izao fotoana izao. Noho izany dia nijanonana ny hetsik’izy ireo nanomboka ny andro nizarana ireo tombotsoa tokony ho azony dia ny vatsim-pianarana nandritry ny roa volana miaraka amin’ny fampiakarana 10% ireo famatsiana ara-pitaovana.
Antony maro no mety nisian’ny fahatarana mikasika ny fizarana ny vatsim-pianrana raha araka ny fanazavana azo avy amin’ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo, ka anisan’izany ny tsy maintsy niandrasana ny fahatongavan’ny vola tany amin’ireo banky, ary ity farany kosa no mitsinjara izany. Misy anefa ny rafitra tsy maintsy narahana ka izany no nahatonga ny fahatarana.
Tetsy an-kilany kosa dia nanaitra kely ireo mpiantra ny nahitany ny peta-drindrina, fa nihena ny vatsim-pianarana hoan’ireo mpiantra voatery tsy maintsy namerin-taona. Hatramin’izay anefa raha araka ny fanazavana dia feno hatrany izany vatsim-pianarana izany fa tamin’ity taona ity kosa dia ny antsasany ihany no azon’izy ireo.
Marihana fa Ar 5 000 isam-bolana ny vatsim-pianarana hoan’ireo izay mamerin-taona ao amin’y kilasy voalohany, raha Ar 22 000 kosa izany hoan’ireo vaovao. Raha tao izany ny kajy tsotsotra dia mandray eo amin’ny Ar 77 000 izy ireo miaraka amin’ny fampitaovana, raha Ar 110 000 kosa hoan’ireo mpianatra vaovao.